» स्थानीय तहको नेतृत्व युवामा जान लागेको हो ?
स्थानीय तहको नेतृत्व युवामा जान लागेको हो ?
२५ बैशाख २०७९, आईतवार १३:२९ प्रकाशित
काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीत तह निर्वाचनमा युवाहरुले उत्साहजनक रुपमा उम्मेदवारी दिएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले निर्वाचनपछि ठूलो संख्यामा युवाहरु स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने स्पष्ट देखाएको छ ।
आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनमा विभिन्न पदमा १ लाख ४५ हजार १० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन मार्फत ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।
आयोगका अनुसार यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेमध्ये २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ३५ हजार २६७ जना रहेका छन् । यस्तै ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका ६७ हजार १६२ छन् भने ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ३७ हजार ५४ जना । उम्मेदवारी दिनेमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ५ हजार ५२७ जना रहेका छन् ।
कुल उम्मेदवारमध्ये २४.३२ प्रतिशत २१ देखि ३५ वर्षका, ४६.३१ प्रतिशत ३६ देखि ५० वर्षका, २५.५५ प्रतिशत ५१ देखि ६५ वर्षका र ३.८१ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा माथिका रहेका छन् ।
वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा प्रमुख पदमा ३ हजार २३८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । तीमध्ये २१ देखि ३५ वर्षका ६८० जना, ३६ देखि ५९ वर्ष उमेरका १ हजार ४३२ जना, ५१ देखि ६५ वर्षका ९८१ जना र ६५ वर्षभन्दा माथिका १४५ जना रहेका छन् ।
अध्यक्ष पदमा ३ हजार ९२ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा २१ देखि ३५ वर्षका ६२२ जना, ३६ देखि ५० वर्षका १ हजार ४७० जना, ५१ देखि ६५ वर्षका ८३६ र ६५ वर्षभन्दा माथिका १६४ जना रहेका छन् ।
उपप्रमुख पदमा १ हजार ९६४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेमध्ये २१ देखि ३५ वर्षका ४९७ जना, ३६ देखि ५० वर्षका १ हजार २ जना, ५१ देखि ६५ वर्षका ४१५ जना र ६५ वर्षभन्दा माथिका ५० जना रहेका छन् ।
उपाध्यक्ष पदमा २ हजार १६३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा २१ देखि ३५ वर्षका ६८२ जना, ३६ देखि ५० वर्षका १ हजार ६७ जना, ५१ देखि ६५ वर्षका ३८४ जना र ६५ वर्षभन्दा माथिका ३० जना रहेका छन् ।
वडा अध्यक्षमा उठेका ३२ हजार ४९३ जनामध्ये २१ देखि ३५ वर्षका ६ हजार ५६३ जना, ३६ देखि ५० वर्षका १५ हजार २४८, ५१ देखि ६५ वर्षका ९ हजार ३४२ र ६५ वर्षभन्दा माथिका १ हजार ३४३ जना रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार सदस्यमा ५३ हजार १७३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेमध्ये २१ देखि ३५ वर्ष ११ हजार ७३१ जना, ३६ देखि ५० वर्षका २२ हजार ९७३ जना, ५१ देखि ६५ वर्षका १५ हजार ७३१ र ६५ वर्षभन्दा माथिका २ हजार ७३८ जना रहेका छन् ।
महिला सदस्यमा ५३ हजार १७३ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा २१ देखि ३५ वर्षका ७ हजार २७९ जना , ३६ देखि ५० वर्षका १२ हजार ८२९ जना, ५१ देखि ६५ वर्षका ४ हजार ९७९ जना र ६५ वर्षभन्दा माथिका ५१२ जना रहेका छन् ।
यस्तै, दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २८५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेमध्ये २१ देखि ३५ वर्षका ७ हजार २१३ जना, ३६ देखि ५० वर्षका ११ हजार १४१ जना, ५१ देखि ६५ वर्षका ४ हजार ३८६ जना र ६५ वर्षभन्दा माथिका ५४५ जना रहेका छन् ।